Ukuqagela Wheel of Fortune - inqubo elithakazelisayo
Lalivamile ukuqagela indlela isondo ukubhula fortune, okuyinto kuveza ngosizo amabalazwe. Namuhla, bayanda ngokuvamile wadlala emphemeni of izakhi emashumi mahlanu anamibini, nakuba ngathatha ikhadi amathathu nambili bendabuko. emphemeni Okugcwele has eziningi eziwusizo. Njengoba amakhadi kuwo kakhudlwana, futhi kungenzeka ebanzi ukubikezela abuye ahumushe. Ngaphezu kwalokho, 32 kufanele acabangele isikhundla ikhadi - eqondile noma nabokhulumile. Ukuqagela ku umbuthano Fortune 52 musa ngaphandle lesi senzo, okuyinto zibelula.
Njengoba ukuqagela ukubeka inkosi noma lady oyifunayo isudi phansi jacket. Khona-ke shuffle emphemeni futhi zisuswe. Ngokulandelayo, ukuqala ukuthola ikhadi elilodwa abaphonse phansi ihembe ngendlela ethile.
Kahle isakhiwo indlela nguye lapho amakhadi ifakwa oda reverse, kusukela yokuqedela zangaphakathi nezangaphandle. Kukhona izindlela lapho isakhiwo kwenziwa oda reverse - kusukela zangaphakathi zangaphandle. Ngakho, amakhadi esuke eduze kwenkosi noma intokazi, zibaluleke ngokukhethekile, futhi kanjani Aqhubeka, inzalo kancane. Okokuqala kukhona ulwazi amaqiniso ezincane, kanye sipho ezibaluleke kakhulu futhi ezithakazelisayo ekugcineni. Ngakho isithakazelo ukuqagela ikhadi kwandisa njengoba ukuthuthukiswa.
Ukuqagela Wheel of Fortune ubachazela ngazimbili ikhadi. Ngalezi zindaba okubhekiselwa kuzo kukhona ubunzima obuthile, kodwa isibikezelo kuyiqiniso ngaphezulu. Kukhona uhlelo, lapho amakhadi zenziwa ngababili, bese kunqunywa ukuthi zisho ukuthini futhi udele. Bathatha anti clockwise, kanye ngazimbili izinombolo 16 no-15, 18 no-17, 20 no-19, njll Lolu hlelo ngale ndlela kuvamile futhi linikeza ukwaziswa okunokwethenjelwa.
Okokuqala, ukuqeda iringi olungaphandle isondo fortune. Khona-ke thathani ikhadi yangaphakathi. Lapha, uhlelo olufanayo. Ngakho, ikhadi 5 ibhangqwe 9, 8 kuya ku-12, 6 kuya ku-10 Kuyinto kudingekile kuphela ukwazi ukuthi iringi inenani esikhulu kunesokuqala. Ngenxa yalokho, qiniseka ngazimbili ne amabalazwe zakamuva - ngowokuqala yesine, lesithathu kuya wesibili. Lezi ngazimbili kukhona libaluleke.
Cabanga isondo ukubhula fortune isibonelo.
Isihloko sibikezelo Kuyothi umuntu udluliselwe inkosi yakwa amakilabhu. Ngemva deal, owokuqala ezine izinhliziyo kuvela, okusho yangaphambili noma ukubandakanyeka samanje. Khona-ke ungase ubone eziyisishiyagalombili izinhliziyo ke phambi komshado. Futhi njengoba lezi amakhadi amabili ehlangana, Ngakho-ke, lo mkhosi kuyoba engavamile iyezwakala.
Uthola ayisishiyagalolunye ithamborini elandelayo lithi umuntu akuyona alien uJehova inkazimulo ukuqashelwa. Kuye ke wabonisa isithakazelo abanothando phezu ingxenye wesifazane ocebile (lady ithamborini), njengoba amakhadi amabili ahlangene.
Ngaphezu kwalokho ukubhula Wheel of Fortune kubonisa eziyisithupha wamadayimane. Leli khadi kusho ukuphikisana nokungezwani emkhayeni ikusasa indoda nomkayo, okungase kuholele kuqedwa umshado. Futhi ayisithupha abakuthola uye wakuqinisekisa lokhu futhi ebonisa ukuthi zonke izinhlelo izohluleka. It kuphela uhlala ukuthi mancane amathuba okuba konke akhiwa uqobo.
Omunye umbhangqwana aphume ashone isiqongo kathathu futhi eziyisikhombisa izinhliziyo. Ikhadi lokuqala liyaxwayisa: ukuphila ukuze uphumelele, kumelwe uyeke ukuxabana nomakoti, injabulo kuyofika kuleli cala. Ikhadi lesibili yazisa ukuthi abanye abantu nozwela ukunikeza akuyona iseluleko ngempela lesifanele. Udinga ukumisa ukuthi kumelwe sizilalele.
Futhi manje sekufika isikhashana ezithakazelisayo kakhulu kulminatsiya- ngubani uqeda ukubhula. Fortune yilona elisanda enamandla kakhulu amakhadi ezine. Lona ikusasa. Jack amaqembu ukuthi eziningi zemibuzo yokuphila ukuze ndoda yanquma umngane wakhe futhi ukuthi kubalulekile ukuba aqale lokuziphendulela. I Deuce idayimane likhombisa ukungaqiniseki ukuthi isiphetho yokugcina ayaziwa: konke kungase kushintshwe, noma kungenzeka kuyo izicucu.
Ukubhula isikhathi. Meaning of izinombolo iwashi
Magazine Kuhle we engaziwa
Ukubhula ngokufunda intende: kanjani ukuthola ngesandla, njengoba kuyoba njalo ngalo izingane
Ukuqagela phezu amathambo
Nini Ngingaya ukuqagela? Khetha usuku wenhlanhla uma ufuna ukwenza izibikezelo
Amashampu "ubuhle": incazelo, izinhlobo nezilinganiso
Novemba 12: ukuthi lugujwa ngalolu suku
Shampoo ngamahhashi: kungani kungenjalo?
"Iwayini kusuka kuma-dandelions": isifinyeto kanye nokufanekisa kwendaba
U-Emmanuel Petit uyiqhawe laseFrance
Ezisonga acetic isisindo ukulahleka. Sinikeza umzimba ukuze
Brick kuhhavini okugeza in the isiko Russian
Uhlolojikelele Volkswagen Getta sedan futhi zako phezu izimbangi zayo.
Imithi ye pancreatitis. Ukudla pancreatitis